Subscribers can choose from any of the ff. services: CAREER TIPS - delivers career advice (how to keep current job or findanew one) BUDGET TIPS - delivers budget friendly tips on how to manage and save money on your daily expenses LOVE FACTS - delivers love and dating tips on how to maintainagood and healthy relationship FIRST AID TIPS - delivers simple first aid advice on how to treat or prevent illnesses DIET TIPS - delivers tips tips to maintain your fit physique with simpler and less consuming exercises and diet meal plan that are less expensive! FITNESS TIPS - delivers tips that will help you start an exercise routine that you'll actually enjoy and stick to!relationship DREAM INTERPRETATION - delivers interpretation on your dreams at night - ၀န်ဆောင်မှု ရယူထား သူတွေအနေနဲ့ အောက်ဖော်ပြပါ ၀န်ဆောင်မှုများထဲမှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်လမ်းညွန်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ (လက်ရှိအလုပ်ကို ဆက်လုပ် သင့် ၊ မသင့် (သို့) အလုပ်သစ် ရှာဖွေ သင့် ၊ မသင့် အစရှိတဲ့ သက်မွေးမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ) အသုံးစရိတ်လမ်းညွန်နှင့်သက်ဆိုင်သော ငွေရေးကြေးရေး စီမံခန့်ခွဲနည်းနှင့် ချွေတာစုဆောင်းနည်း အကြံပြုချက်များ အချစ်ရေးလမ်းညွန်ဝန်ဆောင်မှုမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချစ်ရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ချစ်မှုရေးရာရာအဖြာဖြာနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းအကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ပေးသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းနဲ့ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကို ကုသ ၊ ကာကွယ်ဖို့ အကြံပြုချက်များ စားသောက်နည်းလမ်းညွန် - သင့်ခန္တာကိုယ်ကို ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ စားသောက်နည်း အကြံပြုချက်များ ကျန်းမာကြံခိုင်ရေးလမ်းညွန် - သင်နှစ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်များ အိပ်မက်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ခြင်း လမ်းညွန် - သင် ညဘက်မက်တဲ့ အိမ်မက်များရဲ့ အဓီပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်များ
To subscribe, simply text <Service Keyword> or <Service Keyword> ON to 8302. Ex. CAREER to 8302. You’ll get infotext daily. ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ စာတိုပေးပို့မှုနဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ <Service Keyword> or <Service Keyword> ON to 8302. Ex. CAREER to 8302 ပေးပို့လိုက်တာနဲ့ နေ့စဉ် အချက်အလက်တွေရယူနိုင်မှာပါ။ Category	Service	subscription	commands CAREER TIPS	CT ON to 8302	CT to 8302	CAREER to 8302 BUDGET TIPS	BT ON to 8302	BT to 8302	BUDGET to 8302 LOVE FACTS	LF ON to 8302	LF to 8302	LOVEFACTS to 8302 FIRST AID TIPS	FA ON to 8302	FA to 8302	FIRSTAID to 8302 DIET TIPS	DT ON to 8302	DT to 8302	DIET to 8302 FITNESS TIPS	FT ON to 8302	FT to 8302	FIT to 8302 DREAM INTERPRETATION	DI ON to 8302	DI to 8302	DREAM to 8302 Category	Service	subscription	commands လုပ်ငန်းခွင်လမ်းညွန်	8302 သို့ CT ON	8302 သို့ CT	8302 သို့ CAREER အသုံးစရိတ်လမ်းညွန်	8302 သို့ BT ON	8302 သို့ BT	8302 သို့ BUDGET အချစ်ရေးလမ်းညွန်	8302 သို့ LF ON	8302 သို့ LF	8302 သို့ LOVEFACTS ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းလမ်းညွန်	8302 သို့ FA ON	8302 သို့ FA	8302 သို့ FIRSTAID စားသောက်နည်းလမ်းညွန်	8302 သို့ DT ON	8302 သို့ DT	8302 သို့ DIET ကျန်းမာကြံခိုင်ရေးလမ်းညွန်	8302 သို့ FT ON	8302 သို့ FT	8302 သို့ FIT အိပ်မက်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ခြင်း လမ်းညွန်	8302 သို့ DI ON	8302 သို့ DI	8302 သို့ DREAM
ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖုန်းကို ဘယ်လိုမျိုး ပေးပို့ပါသလဲ။
Content will be delivered thru SMS. စာတို (SMS) ကနေတဆင့် အချက်အလက်တွေကို ပေးပို့မှာပါ။
မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
Any mobile phone with text messaging service. စာတိုပေးပို့တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုစနစ်ပါရှိတဲ့ မည်သည့်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၀န်ဆောင်မှု ရယူထားသူမှာ ၀န်ဆောင်မှုကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် လက်ခံရရှိမလဲ။
You will receive the 1 info content fromachosen category onceaday. သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် အကြောင်းအရာ (၁) နေ့ကို တစ်ခု ရရှိမှာပါ။
၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူ၌ ဖုန်းဘေလ်ငွေလက်ကျန်လုံလောက်မှုမရှိပါက မည်သို့ ဖြစ်မည်နည်း။
If subscriber is still subscribed to the service, subscriber will receive content once he tops up. ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူသည် ၀န်ဆောင်မှုရယူထားမြဲဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုလမ်းညွန်ချက် sms အား ဖုန်းဘေလ်လုံလောက်စွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လိုမျိုး ၀န်ဆောင်မှုကို ရပ်လို့ရပါသလဲ။
To deactivate the service, you must send <Service Keyword> OFF to 8302. Ex. CAREER OFF to 8302 သင့်အနေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှု မရယူလိုတော့ဘူးဆိုရင် ဥပမာ - <Service Keyword> OFF to 8302. Ex. CAREER OFF to 8302 ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ Category	Service	unsubscribe	commands CAREER TIPS	CT OFF to 8302	UNCT to 8302	CAREER OFF to 8302 BUDGET TIPS	BT OFF to 8302	BT OFF to 8302	BUDGET OFF to 8302 LOVE FACTS	LF OFF to 8302	UNLF to 8302	LOVEFACTS OFF to 8302 FIRST AID TIPS	FA OFF to 8302	UNFA to 8302	FIRSTAID OFF to 8302 DIET TIPS	DT OFF to 8302	UNDT to 8302	DIET OFF to 8302 FITNESS TIPS	FT OFF to 8302	UNFT to 8302	FIT OFF to 8302 DREAM INTERPRETATION	DI OFF to 8302	UNDI to 8302	DREAM OFF to 8302 Category	Service	subscription	commands လုပ်ငန်းခွင်လမ်းညွန်	8302 သို့ CT OFF	8302 သို့ UNCT	8302 သို့ CAREER OFF အသုံးစရိတ်လမ်းညွန်	8302 သို့ BT OFF	8302 သို့ UNBT	8302 သို့ BUDGET OFF အချစ်ရေးလမ်းညွန်	8302 သို့ LF OFF	8302 သို့ UNLF	8302 သို့ LOVEFACTS OFF ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းလမ်းညွန်	8302 သို့ FA OFF	8302 သို့ UNFA	8302 သို့ FIRSTAID OFF စားသောက်နည်းလမ်းညွန်	8302 သို့ DT OFF	8302 သို့ UNDT	8302 သို့ DIET OFF ကျန်းမာကြံခိုင်ရေးလမ်းညွန်	8302 သို့ FT OFF	8302 သို့ UNFT	8302 သို့ FIT OFF အိပ်မက်အဓိပ္ပါယ်ဖော်ခြင်း လမ်းညွန်	8302 သို့ DI OFF	8302 သို့ UNDI	8302 သို့ DREAM OFF